Wasiiro ka tirsan Xukuumadda Kheyre oo ku biiray ololaha ka dhanka ah Jawaari | Baydhabo Online
Wasiiro ka tirsan Xukuumadda Kheyre oo ku biiray ololaha ka dhanka ah Jawaari
Wasiiro ka tirsan Xukuumadda Ra’iisul Wasaare Kheyre ayaa si toos ugu biiray ololaha ka dhanka ah Guddoomiyaha Golaha Shacabka Mr Jawaari, taasoo banaanka u soo saareysa shakigii laga qabay in Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha ku lug lahaa Mooshinkii Jawaari.
Shirkii Jaraa’id ee xalay uu qabtay Guddoomiye kuxigeenka 1aad ee Golaha Shacabka C/wali Ibraahim Muudey ayaa waxaa goobjoog ka ahaa Wasiiro ka tirsan Xukuumadda, inkastoo aysan ka soo muuqan Muuqaalkii shirkii jaraa’id.
Qaar ka mid ah Wasiirada ku dhow dhow Ra’iisul Wasaare Kheyre ayaa lagu arkay kulamo dhowr ah oo ka dhan ahaa Guddoomiye Jawaari, waxaana tirada Xildhibaanada saxiixay mooshinka la sheegay inay ka mid ahaayeen Wasiirada Xildhibaanada ah.
Ra’iisul Wasaare Kheyre ayaa kulamo la lahaa Xildhibaanada Baarlamaanka, isagoo gadaal ka riixayay mooshinkan iyo ololaha ka dhanka ah Guddoomiyaha rug cadaaga ah Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari.
Khilaafka siyaasadeed ee k dhex bilowday Baarlamaanka iyo Xukuumadda ayaa ka duwan khilaafaadyadii horay loo soo arki jiray, sida Madaxweyne iyo Ra’iisul Wasaare, waxaana la ogeyn halka uu ku dambeyn doono xaalka.
Dhinaca kale Xildhibaanada Mucaaradka iyo kuwa taageersan Jawaari ayaa wada mooshin ka dhan ah Ra’iisul Wasaaraha, waxaana diyaar garowga mooshinkan uu soo xoogeystay habeenkii xalay ahaa.